संक्रमितसँगको सम्पर्कवाला २५ जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ, कसले सार्याे त ७६ बर्षिय बृद्वलाई काेराेना ? - Awajonline Online Newspaper
संक्रमितसँगको सम्पर्कवाला २५ जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ, कसले सार्याे त ७६ बर्षिय बृद्वलाई काेराेना ?
आवाज संवाददाता १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार
जेठ १६, चरिकोट । बुधबार पुष्टी भएका भीमेश्वर नगरपालिका–२, दोलखाका ७६ बर्षिय संक्रमितसँगको सम्पर्कवाला २५ जनाकै पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
घाँटीभित्रको ¥याल संकलन गरी शुक्रबार बिहान पी.सी.आर. परिक्षणका लागि धुलिखेल अस्पताल पठाईएकोमा २५ जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाका प्रमुख विभुकुमार झाले जानकारी दिए ।
संक्रमित बृद्धका परिवार तथा छिमेकी ५ जना, उनको घरमा बास बसेका एक नेपाली सेना तथा ती सेनाका सम्पर्कमा गएका १३ सैनिक, आकस्मिक कक्षमा उनको उपचारमा संलग्न स्थानीय ६ स्वास्थ्यकर्मी गरी २५ जनाको ¥याल संकलन गरी पीसीआर परिक्षणका लागि पठाईएको थियो ।
पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि जिल्लावासीमा खुशीसँगसँगै चिन्ता पनि थपिएको छ । महाराजगंजस्थित टिचिङ अस्पतालमा उपचार गराईरहेका कोरोना संक्रमित बृद्धलाई कोबाट कहिले कोरोना भाईरस सा¥यो भन्ने प्रश्नले जिल्लाबासीमा चिन्ता थपिएको हो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले संक्रमितसँगको सम्पर्कवाला र कोरोना भाईरस सार्नेलाई मिहिन ढंगले ट्रेसिङ गर्ने जनाएको छ ।
घरबाट बाहिर ननिस्कने बृद्धलाई कसरी कोरोना संक्रमण भयो भन्ने विषयले जिल्ला तातेको छ ।
संक्रमितलाई काठमाण्डौंसम्म लैजाने एम्बुलेन्स चालकको पीसीआर परीक्षण गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । स्थानीयहरु भने परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने र कोरोना सार्नेलाई यथासक्य ट्रेसिङ गर्नु पर्नेमा जोड दिईरहेका छन् ।
कोरोना सार्ने व्यक्ति पत्ता लगाएर उपचार नगरेसम्म दोलखामा थप संक्रमण बढेर जोखिम अझ बढ्दै जाने उनीहरुको भनाई छ ।